Apple dia afaka nanolotra ny iPads vaovao amin'ny 22 Oktobra | Vaovao IPhone
Toa efa manana daty isika: ny 22 Oktobra no mety ho andro voafidy hanoloran'i Apple ny iPads vaovao. Na dia mbola tsy misy fanamafisana ofisialy aza, ary mbola tsy nalefa ny fanasana, hoy ny AllThingsD, loharano azo antoka akaiky an'i Apple, izany no daty hanatanterahana azy. ny Apple Keynote izay ahitantsika ny iPad Retina 5 sy iPad Mini Retina vaovao.
Araka ny loharanom-baovao, Apple dia hanolotra ireo maodely vaovao amin'ny takelaka misy azy amin'io hetsika io, saingy hisy ihany koa ny toerana hiresahana zavatra momba ny OS X. Ny Mac Pro sy OS X Mavericks vaovao, antenaina havoaka amin'ny besinimaro amin'io andro io ihany, dia azo antoka fa hisongadina be ao amin'ny Keynote an'i Apple. Fahagagana bebe kokoa? Tsy misy vaovao fantatra intsony, eny fa na ny toerana hanaovana ilay hetsika aza. Ny iPad Mini dia naseho tao amin'ny California Theatre any San Jose tamin'ny taon-dasa, na dia nilaza aza ny loharanom-baovao fa tsy azo inoana izany. Ny toerana roa azo inoana indrindra dia ny Ivotoerana Yerba Buena any San Francisco na koa any Cupertino mihitsy, ao amin'ny Auditroire Hall an'ny Apple Town.
Ny tsaho momba ny iPads vaovao dia toa mamela toerana tsy ampoizina kely fotsiny. IPad Retina 5 miaraka amina endrika malefaka sy maivana kokoa, mitovy amin'ny iPad Mini, miaraka amin'ny processeur A7 ary sensor Touch ID, ary iPad Mini misy retina Retina, ary ny fizarana processeur A7 sy sensor Touch ID no tsaho farany hita fa ny indrindra Ao amin'ny net. Mikasika ny fisian'ireo fitaovana vaovao ireo dia voalaza fa ny iPad Mini Retina dia tsy hamidy hatramin'ny 2014 noho ny olana amin'ny famokarana azy.
Mianara bebe kokoa - iPad Mini Retina dia afaka nihemotra hatramin'ny 2014
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Apple dia afaka nanolotra ny iPads vaovao amin'ny 22 Oktobra
Roger rodriguez dia hoy izy:
Heveriko fa ny iPad mini retina dia tsy hanana A7, mety ho A5x toy ny iPad 3 na angamba A6 na A6x toy ny iPad 4
Valiny ho an'i Roger Rodriguez